Maldives - lalàna
Ao amin'ny faritanin'i Maldives ary indrindra amin'ny lalàna amam-pitsipika henjana dia mihatra ny lalàna sy ny fombafomba, izay tsy maintsy ataon'ny mponina ao amin'ny firenena ihany, fa amin'ny vahiny koa. Rehefa manomana fitsangatsanganana any amin'ireo toeram-ponenana any Maldiviana , andramo ny manomana mialoha sy mandinika ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ny lalàna sy ny fomba nentim-paharazana ao an-toerana mba hisorohana ny toe-javatra mampalahelo amin'ny fialantsasatra .
Inona no tokony ho fantatrao rehefa mandeha ny dia mankany Maldives?
Eritrereto ireo fitsipika manan-danja izay ilainao mba handinihana lalandava rehefa mitsidika ny Maldives:
Tsy voarara ny toaka. Ny iray amin'ireo fitsipika manan-danja indrindra ao amin'ny faritanin'i Maldives dia ny fandraràna ny fampidirana ny alikaola ao amin'ny firenena ary ny fisotroana any amin'ny toerana ho an'ny daholobe. Voarara ary amidy sy ampiasaina izy ireo. Ireo mpizahatany mitsangatsangana dia afaka misotro toaka ao anatin'ny toeram-ponenana (tsy manaiky ny lalàna maina) izy ireo - any amin'ny trano fandraisam-bahiny , trano fisakafoanana, bara, sns. Aza manandrana mitondra alika amin'ny fiaramanidina, na dia mividy fivarotana maimaim-poana aza. Tsy vitanao ny tsy hanao izany, fa hiatrika lamandy lehibe ianao, ary amin'ny raharaha faran'izay ratsy indrindra - fotoam-pitsarana.
Ny finoana tokana dia ny finoana silamo. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ao amin'ny Maldives, tsy tokony hiresaka mivantana momba ny finoan'ny olona iray (raha tsy Islama izany). Tsy vitan'ny hoe mandray fotsiny ity, fa afaka mitondra sazy. Miaraka amin'ny resaka finoana ao amin'ny firenena ihany koa, ny zavatra rehetra dia tena henjana. Na dia eo aza ny fitsipi-pifehezana dia tokony haka ny silamo ny olona izay hahazo ny zom-pirenena. Raha tsy mitranga izany, na raha misy fiovan'ny finoana aorian'ny fandraisana ny antontan-taratasy ofisialy amin'ny zom-pirenena, dia tsy maintsy havela heloka ny toeran'ny olom-pirenena Maldives, hofoanana ireo antontan-taratasy.
Fiarovana ny tontolo iainana. Ho an'ity sokajy ity dia fitsipika manan-danja maro:
Tsy azo atao ny manimba ny haran-dranomasina sy ny maty, na amin'ny lalina, na amin'ny morontsiraka;
Voarara ny manakatra avy any ambany ary manokatra ny lavaka;
Tena voarara tanteraka ny fihazana ambanin'ny tany, ary ny fanjonoana dia azo atao raha tsy aorian'ny fahazoana fahazoan-dàlana manokana;
Tsy azo atao ny mamela ny fonosana rehetra, manaparitaka tavoahangy, fonosana tsy manara-penitra, sns.
Takina amin'ny fisehoana. Ao amin'ny Maldives, voarara ny firaisana ara-dalàna tsy mendrika hanaovana akanjo marevaka, mba hilomano tsy misy afa-tsy ny nosy Kuramathi ihany , handeha ho kiraro sy kiraro fohy. Ny lehilahy dia tsy avela hiseho amin'ny tratra. Ao amin'ny renivohitry ny firenena io fitsipika io dia manana fepetra henjana kokoa aza, ilaina ny manao akanjo araka ny fomban'ny Silamo: lehilahy - pataloha sy lobaka, vehivavy - akanjo sy akanjo lava. Ao amin'ny tora-pasika ao Male, ny vehivavy dia avela hilomano amin'ny t-shirt sy ny shorts.
Fomban-drazana sy kolontsaina. Ao amin'ny faritanin'ny firenena dia tsy afaka mitifitra lahatsary ao anaty moske ianao, mifankahalala sy miresaka amin'ny mponina ao an-toerana, misotro alika any ivelan'ny toeram-ponenana ary mitsidika ireo nosy tsy misy fahazoan-dalana.
Fahasalamana sy fiarovana. Indraindray, ilaina ny manamarika ny ilàna ny fanaraha-maso ny fepetra fiarovana mandritra ny fialantsasatra:
Aza mikasika ny tanan'ny mponina an-dranomasina, mampidi-doza, maro amin'izy ireo no misy poizina;
misotroa rano tavoahangy;
Ampiasao ny lobolom-bolan'ny masoandro sy ny kiraro manokana amin'ny fandroana mba hisorohana ny fatiantoka amin'ny vatohara.
Sazy ho an'ny fanitsakitsahana lalàna sy fitsipika
Ho an'ny heloka bevava sasany dia ho hitanao fa mety, ohatra:
$ 1000 ho an'ny fampiasana vatohara, kofidra, kintana ho fahatsiarovana ho an'ny fahatsiarovana, ho an'ny fihazana ambanin'ny tany, nodisma;
$ 500 ho an'ny fahasimban'ny tontolo ambanin'ny tany, fanangonana corals eo akaikin'ny moron-dranomasina.
Ho an'ny fanafarana ny alikaola sy ny zava-mahadomelina ao amin'ny Maldives, ny jiolahim-boto, ny famonoana na ny fanondranana biby an-tanety, kiraro ary ny vatohara avy any amin'ny firenena, ny mpanafika dia miatrika fonja lehibe.
Fialantsasatra any Japon
Sarintany momba ny fizahantany any Singapore Pass
Nepal - ireo lalàna
Valam-pirenena ao Nepal
Ahoana no hisafidianana accessories ho an'ny akanjo?
Ny Andron'ny Mpinamana dia ny tantaran'ny fialantsasatra
Ahoana ny fomba fanaovana sakafo matsiro?
Kabina fantsom-pitaratra misy fitaratra amin'ny efitra fandroana
Mahavariana tokoa ve ny mikarakara mofomamy mena?
Petunia anaty tavoahangy
Nitombo ny Liam Hemsworth
Ny tsindry ataon'ny olombelona tsotra - ahoana no handrefesana tsara sy ny tokony hatao amin'ny fanavakavahana?
Amin'ny inona no mitafy kiraro eny amin'ny lampihazo?
Sarivongana mihetsiketsika ho an'ny reny mampinono
Ahoana no hanamboarana mofo?